Somalia online: Puntland oo amar kasoo saartay gaadiidka rarka ka keena koonfurta Soomaaliya(Akhriso+Dhegeyso)
Puntland oo amar kasoo saartay gaadiidka rarka ka keena koonfurta Soomaaliya(Akhriso+Dhegeyso)
Posted on August 25, 2016RBC, Wararka
Garowe-(RBC Radio)-Madaxwayne ku xigeenka dawlada Puntland Eng. Cabdixakiin Cabdulaahi Xaaji Cumar Camay ayaa soo saaray warqad wareegto ah taas oo lagu xusay in laga bilaabo 1/9/2016 ay joojisay dawlada Puntland gadiidkii Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya ka imaanayey ee sida tooska ah ugu kala gudbayey guud ahaan dalka.
Afhayeenka Madaxwaynaha dawlada Puntland mudane C/laahi Maxamed Jaamac Quraan-Jeceloo oo waraysi siiyey Radio Garoowe ayaa sheegay guud ahaan gadiidka kaladuwan ee u raran Puntland inay rarka ku dajinayaan magaalada Gaalkacyo kadibna ay ku wareejiyaan gadiidka kale.
Sidookale dowladda Puntland ayaa joojisay gadiidka qaadka ka keena koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya kuwaas oo Gaalkacyo ka soo gala koonfurta waxaana wareegtada lagu sheegay inaysan jiri karin gaari qaad ka keena dhanka koonfurta inuu soo galo gudaha magaalada Gaalkacyo.
Wareegtadan oo shalay ka soo baxday Xafiiska Madaxwayne ku xigeenka ayaa maanta waxaa saxaafada u akhriyey Afhayeenka Xukuumada Puntland Cabdulaahi Jaamac Quraan jecel.
Akhriso Wareegtada ka soo baxday xafiiska madaxweyne kuxigeenka.
Halkaan ka dhegeyso afhayeenka dowladda Puntland.